/blog/Gallery/Dib u eegida Oxymetholone: ​​Ultimate Guide ee Oxymetholone (Anadrol)
Posted on 01 / 08 / 2019 by Dr. Patrick Young ku qoray Gallery.
Maaha wax la yaab leh in qaab-dhismeedka jirka uu ka mid yahay waxyaabihii ugu adkaa ee uu qofku ku lug lahaa. Si kastaba ha noqotee, haddii si sax ah loo sameeyo badeecada saxda ah, tababbarka, iyo cuntada, waxay u bixisaa mid ka mid ah labada qaybood. Dhab ahaan, miisaannada iyo tababarka kaligood oo kaliya ayaa laga yaabaa inaanay ku siinin natiijooyinkaaga ku habboon inta dad badani u fekerayaan. Oxymetholone (Anadool) waa mid ka mid ah alaabooyinka aad isticmaali kartid si aad u bedesho safarkaaga jidh-dhiska ee ku habboon waayo-aragnimada ugu qancisan ee noloshaada.
Waxyaabaha kale waa markaad da 'jirtid, soosaarka hoormoonka jidhka sida Testosterone hoos u dhacdo oo kaliya ayaa lagaa tagayaa adiga oo ku xiran nooca synthetic of it.Anadrol hawlaha sida Testosterone ee jirka iyo fursadaha waa in ay bixin doonaan waxtar dheeraad ah marka loo eego kan dambe. Ma aha oo keliya in aad aragto horumarka jirkaada laakiin xitaa ugu muhiimsan waxay kaa caawineysaa inaad ka soo kabato wax kasta oo dhejis ah oo kugu adkaan kara socdaalkan.
Haddii aad ka fekereyso inaad ku noolaato qaab nololeed oo wanaagsan oo jidhka ah, markaa waa inaad qaadataa Anadrol sababtoo ah waxay si weyn u caawineysaa inaad kordhiso muruqyadaada iyo xooggaaga. Hadda waxa laga yaabaa inaad rabto inaad wax badan ka ogaato Oxymetholone (Anadrol) (434-07-1). Waxaad heli doontaa dhammaan macluumaadka ku saabsan daqiiqad.
Waa maxay Oxymetholone (Anadrol)?
Oxymetholone waa magaca calaamadda ah ee loogu talagalay caanaha nabrrolka 50 kaas oo ah steroid anabolic oo aad loo yaqaan. Isaga oo weydii waxa "50" micnaheedu? Waxay muujinaysaa milligariga in steroid this lagu soo bandhigay. Waa kuwan qaar ka mid ah magacyada kale ee caanka ah ee Anadrol;
1960s qaar ka mid ah shirkadaha daawooyinka ayaa soo saaray Anadrol. Shirkadahaas waxaa ka mid ah Zoltan, Syntex, iyo Park Davis. Waagii hore, waxaa loo adeegsaday kor u qaadista unugyada dhiiga gaduudan ee dadka qaba dhiig yari. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu kordhiyo rabitaanka cuntada, ka caawinta xoojinta lafaha iyo la dagaallanka muruqyada loola dhaqmo. Daraasad la sameeyay intii lagu jiray bukaanno qaba AIDS-ka muddo soddon isbuuc ah oo miisaankoodu uu ku socdo murqo-buuq ayaa muujiyay in steroid-ka ay ka caawisay inay helaan celcelis ahaan sideed kiilogaraam xilliga dhamaadka muddada daraasadda.
Waxay ahayd kadib markii ay dadku ogaadeen in loo adeegsan karo ujeedooyin jidheed. Jidh-dhisayaashu waxay bilaabeen inay isticmaalaan si ay u gaaraan tiro muruq oo weyn. Maanta Oxymetholone (Anadrol) (CAS 434-07-1) waxaa loo tixgeliyaa sida mid ka mid ah sterids ee ugu xoogan ee afka laga qaato ee suuqa. Ma aha wax la yaab leh in ay ka caawin karto mid ka mid ah muruqyada weyn ee laba jeer sida ugu dhakhsaha badan sida steroids kale. Cunto-saarkeedu yahay saamiga orrogenic waa 350: 55. Dhismaha jirka ah ee isticmaala waxa uu u sheegi karaa in steroidkani uu ka badan yahay iyo ka badan yahay waxa ku jira shaxanka.
Waxyaabaha kale ee ka dhigaya in badan oo steroid caadi ah oo ka mid ah dadka badan waa xaqiiqda ah in loo qaadan karo hadal ahaan. Sababtoo ah waa xero 17aa oo micnaheedu yahay in ay qaab ahaanba wax ka bedesho 17th Naadiga atomiga ayaa laga qaadi karaa hadal ahaan.
Oxymetholone waa stomoid aad u macquul ah oo saameynteedu xoog badan tahay in daawadani lagu qiyaasay inay saddex jeer ka xoog badan tahay testosterone. Maxaa kale oo aad rabi lahayd steroid anabolic?
Oxymetholone (Anadrol) Habka waxqabadka
Oxymetholone waa derajada tijaabada ah ee synthetic ah oo leh anabolic sare ee firfircoonida iyo quudinta. Waxay ka shaqeysaa iyada oo la xakameynayo cytoplasmic testosterone receptors ee unugyada iyo xubnaha kuwaas oo ah iyo inay ka jawaabaan si ay u sameeyaan dhismo hormoon-receptor ah. Qalabka hoormoonka dib-u-soo-kabashada ayaa markaa ku xidhan DNA-da taas oo kor u qaadaysa soo-saarista DNA iyo samaynta mRNA taas oo bedesho soo-saarista borotiinka.
Intaa waxaa dheer, Oxymetholone wuxuu ku dabaqayaa saameynta anabolic on muruqyada qalfoofka iyo qalfoofka iyadoo weliba xawaareyneysa erythropoiesis. Sidoo kale, daawadani waxay ficil-celin ku samaysaa fayodhowrka jirka ee jirka iyada oo kor u qaadeysa heerarka xeryaha yaryar ee ah ee ka caawiya soo saarida unugyada dhiigga cas. Waxay sidoo kale kordhinaysaa dheellitirka nitrogen ee jirka iyo iyada oo loo marayo kor u qaadista biyaha.
Waa maxay Oxymetholone loo isticmaalo jirka jirka?
Oxymetholone wuxuu leeyahay wax badan oo faa'iido jirka ah oo miisaanku keeno. Waa kuwan qaar ka mid ah;
Waxay kor u qaadaysaa unugyada borotiinka- Kacaawinta murqaha waa natiijo ka dhalata borotiinka barafka tan iyo markii uu yahay dhismaha ugu muhiimsan ee muruqyada jirka. Markaad ka shaqeyneyso waxaa jira baraf maskax oo murugo ka baxaya koritaanka murqaha. Baaxadda muruqyadaada ee kor u kaca, jidhku waa inuu leeyahay dheellitir dheeri ah oo dheellitiran oo ka badan inta uu ka dhacayo, iyo Oxymetholone oo kor u qaadeysa dheecaanka borotiinka, waxaa jira abuurista muruqyo waaweyn.
Wuxuu xoojiyaa soo saarida unugyada dhiigga cas- Unugyada dhiigga cas waxay hubiyaan in murqahaagu uu yahay mid aad u wanaagsan oo leh oksijiinedkan taas oo daalku ku hayaa daal. Sidaa darteed, waxaad awoodi doontaa inaad sameysid shaqooyin wanaagsan oo aanad ka qabin daal aad u daran sidaas darteed dhaliya muruqyo ka fiican. Dhaqdhaqaaqa jirka wuxuu ka faa'iideystaa dulqaad darrada sii kordheysa maxaa yeelay isaga / iyadu waxay awoodi karaan inay si adag u tababaraan usbuuca oo dhan.
Noololaha wuxuu xoojiyaa xajinta nitrogen- Steroidkani wuxuu kordhin karaa xaddiga nitrogen ee muruqyadaadu ku kaydin karaan. Faa'iidada tan la mid ah waa in nafaqooyin dheeraad ah la gaarsiiyo muruqyadaada taas oo keeneysa koritaankooda iyo dib u soo kabashada ka dib markaad shaqeyneyso.
Waxay ilaalisaa muruqyada goynta- Qofna ma doonayo inuu lumiyo muruqyada ay shaqeynayeen muddada jarista. Maxaa loola jeedaa Anadrol waa in uu weeraro oo burburiyaa unugyada dufanka jirka iyada oo aan la jarin murqaha. Marka dufanka ku wareegsan murqaha muruqyada muruqyada muruqyada ayaa hadda muuqda la jeexi doonaa oo kali. Si aad u aragto aragti adag oo adag Oxymetholone (Anadrol) 434-07-1.
Waxay xoojisaa rabitaanka cuntada-Waxaa loo baahan yahay in jirka lagu sameeyo qiyaaso badan oo jirka ah si uu u awoodo inuu dhiso murqaha. Laakiin dhibaatadu waxay timaaddaa marka mid ka mid ah uu u nugul yahay cunto yari si uu u qaato kalooriyada loo baahan yahay. Oxymetholone waxay ku siin doontaa cunto yaryar kugu filan oo kor u qaadaya kaloriintaada.
Waxay kordhisaa xuddunta awoodda- Anadrol waxay kordhin doontaa awooddaada, faa'iido gaar ah u leh dadka culeys-saarayaasha ah.
Waxaa muhiim u ah kororka awoodda jirka- Oxymetholone waxay hagaajinaysaa awoodda iyo haddii aad raadineyso wax kuu caawin doona inaad isku darsato wax badan oo garabka saxaafada ah aad hubaal tahay inaad ku jirto wadada saxda ah. Iyadoo la raacayo dib u eegisteeda, daroogadaas ayaa lagu soo waramayaa in ay ka dhigto kuwa korka ku xiran isticmaalkooda.
Dhaqan ahaan waxay kor u qaadaa koritaanka muruqa- Kuwo badan oo jidh-dhiseyaal ah ayaa isku dayay in ay helaan murqo aan waxtar lahayn. Iyadoo Oxymetholone, uma baahnid inaad isku daydo inaad si adag u tijaabiso. Markaad bilowdo kaniiniyadaas, waxaad filan kartaa inaad muruqyada ku qaadato wax ka yar laba bilood. Qeybta ugu wanaagsan ee isticmaalka daroogada ayaa ah inaadan sugin muddo aad u dheer si aad u ogaato in murqahaagu uu sii weynaado. Usbuuca labaad, waxaad awood u yeelan doontaa inaad aragto farqi yar.
Si dhakhso ah ayuu u shaqeynayaa natiijooyinka- Haddii aadan ku fiicnayn inaad sameysid bukaanka, waxaad ku qanacsan tahay xaqiiqda ah in steroidkani uu natiijooyin fiican ka helayo waqtiga ugu gaaban. Waxay ku fiicnaan doontaa inaad jirkaaga u oggolaato inaad ku guuleysatid yoolalka jirkaada in ka yar siddeed toddobaad.
Hagaajinta waxqabadka-Marka laga reebo dhismaha muruqyada, Anadrol wuxuu hal kor u qaadayaa waxqabadka. Natiijo ahaan, jimicsiyeyaasha iyo ciyaartooyda waxay si dhakhso ah uga soo kaban karaan kulamada tababarka. Sidaa awgeed, way ku sii adkeyn karaan xitaa marar badan.
Wuxuu gargaaraa miisaanka- Haddii aad rabto in aad jidhkaaga ka dhigto mid feejignaan badan iyo xittaa waxtar leh, markaa waa inaad ka fikirto isticmaalka Oxymetholone macaashka. Dad badan oo isticmaalay ayaa soo sheegay in ay ka caawisay helitaanka miisaan degdeg ah. Qaadashada 20-30 toddobaadyada 4-6 ma aha wax kaftan ah, iyo Anadrol ayaa xaqiijiyay in ay bixiyaan xitaa in ka badan.
Wuxuu kordhiyaa duruufaha- Inaad awood u yeelatid inaad ku qodo kulammada tababarkaada ama tababarka ee mudo dheeraada waa wax kasta oo jirka ka mid ah oo diyaarsan. Mid ka mid ah natiijooyinka Oxymetholone oo ah inay kor u qaaddo istaandarkaaga oo kuu oggolaanaya inaad tababar ku qaadato jirkaaga ilaa iyo inta aad rabto in aad kor u qaaddo qiyaasta ugu dambeysa.
Duufaan xanuunka wadaagga ah- Xanuunkani wuu ka dhigi karaa mid nacayb ah oo ka shaqeynaya xitaa inkasta oo Anadrol loo yaqaano inuu abuuro murqo iyo xoog, waxaa kale oo uu ka ciyaaraa door muhiim ah marka la siinayo kooxaha la dareemayo dareemid cusbo leh, taas oo yareyneysa xanuunada wadajirka ah. Mar dambe ma yeelan doontid cudurdaar si aanad culeyska u qaadin inta badan sida aad jeceshahay.
Oxymetholone (Anadrol) qiyaasta
Kaliya qaadashada Anadrol 50 kama balan qaadayso natiijooyinka wanaagsan. Waxaad u baahan tahay inaad qaadato qiyaasta saxda ah haddii aad rabto inaad ogaato natiijooyinka wanaagsan. Wax kale oo aan ahayn, qaadashada qiyaasta saxda ah waxay kaa ilaalisaa saameynta daawada ee suuragalka ah ee ku xiran in ay khalad tahay Qiyaasta daawada Nololeed. Si kastaba ha noqotee, qiyaasta daawada Nolol waxay ku kala duwan tahay hal qof ilaa mid kale iyada oo ku xiran hadafyada qofka.
Marka laga soo tago qiyaasta daawada dheeraadka ah ee xaddiga aad qaadato isbeddelada marxaladaha kala duwan ee wareegga, Anadrol wuxuu leeyahay qiyaasta caadiga ah ee 50mg maalin kasta. Bilowga wuxuu bilaabi karaa qiyaas yar oo ah 25mg-50mg, oo haddii jidhkoodu u dulqaadan karo daroogada, waxay hadda kordhin karaan qaadashada.
Dad badan ayaa u muuqda in ay xad-dhaaf u yihiin fikirka daroogada taas oo kordhin doonta rabitaankooda. Si kastaba ha ahaatee, tani ma aha kiiska la leh Anadrol. Waxay wax u qabataa dhinaca dambe sababtoo ah waxay ka hortagtaa rabitaanka cuntada ee marba marka ka badan. Sidoo kale, waxaa lagula talinayaa in uusan qaadan qadar badan oo ah daroogada sababta oo ah wuxuu keeni karaa waxyeelo daran.
Haddii aad rabto in aad wax yar ka badan, waxaad kordhin kartaa qiyaastaada 100mgs. Si kastaba ha ahaatee, waxaa lagula talinayaa in aad tan sameyso kaliya haddii jidhkaaga uu u dulqaadan karo. Ha sameynin qalad ka badan 150mgs sababtoo ah tani kuma fiicnaan doonto beerkaaga. Waxay sidoo kale horseedi kartaa hoos u dhigista jahawareerkaada, tanina waxay macnaheedu noqonaysaa inaadan awoodin inaad cuntid sida sidaad u isticmaashay ka hortagga horumarkaaga.
Oxymetholone (Anadrol) wareeg iyo xargo
Oxymetholone (Anadrol) wareega
Dhismayaal badan ayaa doorbidaya isticmaalka Anadrol wareegtadooda iyaga oo ujeedadoodu tahay inay kor u qaadaan wax qabadkooda. Waa kuwan qaar ka mid ah wareegyada inta badan ay doorbidaan;
1. Kuwa bilowga ah
Waxay qaadataa laba iyo toban isbuuc.
Usbuuca 1 usbuucii 6- Qaado 25-50mg ee maalin walba
Usbuuca 1 todobaadkii 12- Qaado 300-500mg of Testosterone Enanthate toddobaadkii.
Tani waa mid ka mid ah bilawga iyo saaxiibtinimada bilawga ah ee loo yaqaan 'Testosterone' kaas oo qeyb ka ah iyo qadar sare oo keenaya saameynta anabolic ee loo baahan yahay. Dhinaca kale, Anadrol waxay ku jirtaa qiyaasta caadiga ah ee bilowga ah lagula taliyay in la qaato.
Inta lagu jiro wareeggan, waxaa lagugula talinayaa in aad qaadato SERM sida Nolvadex ama aromaticase xayiraad kasta sababtoo ah dabeecadda sare ee estrogenic ee xayawaanku leeyahay. Wixii kasta oo bilawga ah oo raba inuu kor u kaco, tani waa tii ugu wanaagsanayd ee wareegga Noolka si ay u tagto.
2. Isticmaalayaasha dhexdhexaadka ah
Week1 todobaadkii 6- Qaado 50mg ee Anadrol maalin kasta.
Week1 todobaadkii 12- Qaado 400mg ee Deca Durabolin (Nandrolone Decanoate) toddobaadle.
Sidoo kale, qaado 100mg of testosterone Enanthate toddobaadle.
Sida aad u garatay, waxaa jira isbeddello yar oo wareeggan ah marka la barbar dhigo midka koowaad. Miisaankani ma aha anabolic asaasiga ah, ujeedada ugu weyn ee tani waa in la yareeyo kororka dhaqdhaqaaqa estrogenic inta lagu jiro wareegga markaad isticmaasho daroogada sida Anadrol.
Deca Durabolin ayaa ku haboon wareegga wareegga marka la joojiyo isticmaalida Anadrol maxaa yeelay waa agab anabolic ah. Qeybtan Nololeed ee Nololeed, qadarkeeda ayaa laga yareeyay xaddiga 50-100 mg maalin kasta si loo qaato kaliya mgmaanka 50 maalintii. Sababtoo ah daawadani waa anabolic aad u sareysa. Sidaas darteed, uma baahnid korodhka qiyaasta daawada Anadol. Wixii mass ama xoog u hesho, qiyaasta 50mg waa wax ka badan oo ku filan isticmaale dhexdhexaad ah.
3. Isticmaalayaal sareeya
Waxay qaadataa siddeed toddobaad.
Usbuuc 1to usbuucii 8- 100mg ofAnadrol maalintiiba
Qaado 25mg of Testosterone Soo jeedi maalin kasta maalinta kale ee 100mg asbuuc kasta
Qaado 100mg Trenbolone Acetate maalin kasta oo ka duwan saacadda 400mg.
Isbeddelka wareegga ugu sarreeya ee lala yeesho kuwa kale waa in ay qaadato muddo gaaban. Waxay sidoo kale ku lug leedahay steroids kuwaas oo ah qiyaaso gaaban sida Trenbolone Acetate iyo Testosterone Propionate. Isticmaalka wuxuu ku kooban yahay lix asbuuc, laguma talinayo in loo isticmaalo mudo dheer oo badanaa sababtoo ah qiyaasta sare ee 100mg maalintii.
Qeybta ugu wanaagsan ee ku saabsan qiyaasta sare ee daaweynta caanaha ayaa ah inay awood u leedahay bixinta xoog leh iyo kor u qaadista faa'iidooyinka gaar ahaan marka la isku xiro Trenbolone Acetate.
Qeybtan waxaa lagu talineyaa kaliya dadka isticmaala horumarka maxaa yeelay waxay u horseedi kartaa in qofku yeesho awood xad-dhaaf ah iyo cabbir ka badan oo ka dhasha dhaawaca dadka isticmaala heerarka kale.
Anadrol 50 waxay bixisaa feejignaan aad u sarreeya maadama aad dooran karto inaad isticmaasho ama adigaa ku dhejiso steroids kale.
Nolol wareeg oo kaliya- Iyada oo ay socoto wareeggan, waxaad u badan tahay inaad ku guuleysato natiijooyin aad u fiican. Intaad go'aamin karto inaad xakameyso, waxaa wanaagsan in aad doorato steroids aad adoo riixaya si aad isaga ilaaliso in aad kordhiso saameynta daawada. Haddii aad xiiseyneyso in aad kudajiso habka ugu haboon ee suuragal ah, halkan waa siyaabaha aad sameyn kartid taas;
Isticmaal anabolics fudud-Waxaa wanaagsan in aad ku dhejisid steroids oo khafiif ah sida SARMS, Equipoise, Primobolan, iyo Deca Durabolin.
Ha ku xakameynin steroids iyo steroids qiyaasta aad u sareeysa-Iyadoo adoo adoo isticmaalaya steroids sida Testosterone ama Trenbolone, waa inaad iska ilaalisaa inaad qaadato qiyaasta daawada ee Anadol ka badan tahay 200mg.
Iska ilaali inaad ku xakameyso DHT deriska- Isticmaalka Noololka oo leh steroids sida Masteron iyo Winstrol ayaa waxyeello ka badan tan ka fiican. Waxaad heli kartaa faa'iidooyinka aad rabto, hase yeeshee saameynada daawadu keento waa mid aan loo adkaysan karin. Xaaladaha ay qof waliba ku dhufteen Winstrol, waxaa jiray warbixino sheegaya in timo badani ka luntay.
Iska ilaali inaad ku xakameyso steroids kale oo waxyeelo gaarta beerka-Iska ilaali adoo isticmaalaya steroids afka sababtoo ah waxay sababi karaan dhibaatooyinka beerka sida cagaarshow.
Ha xoqin mudo dheer-Iyada oo celceliska waqtiga loogu talagalay in la dhigo afar wiig, waa fiicantahay in la ogaado in mudada isticmaalka dheeraadka ah iyo qiyaasta qiyaasta aad qaadato, inta badan waxyeellada soo noq noqoto.
Sidaa darteed, waa in aad qaadataa xargaha Oxymetholone oo si xeeldheer leh isaga oo aan kufarin mid ka mid ah daroogooyinka.
Sababtoo ah Anadrol waa mid ka mid ah steroids ee ugu xoogga badan suuqa, waa fiican tahay in la helo daaweyn dib-u-hagaajineed oo wanaagsan. Ujeedada arrintani waa inaad u ogolaato inaad sii haysato guulahaaga. Ma noqon doonto caddaalad ah inaad lumiso dhamaanba wixii aad ka faa'iideysatay wareegga wareegga, miyay tahay? Intaa waxaa dheer, PCT waxay kaa caawineysaa inaad iska ilaaliso saameynta daawada ee ay sababi karto xakameynta wax soo saarka testosterone.
Maaddaama Anadrol uu leeyahay nolol aad u gaaban oo uu yahay dhajiye gaaban, waa inaad bilowdaa PCT-gaaga saddex maalmood kaddib markaad qaadato qiyaastaadii ugu dambeysay ee aad isticmaashay. Haddii ay dhacdo in aad adigu ku sameysid steroid kasta oo dherer dherer ah, waa inaad bilowdo PCT 14-18 maalmood kaddib markaad qaadato qiyaastaadii ugu dambaysay. Nolvadex ama Clomid ayaa kaa caawin doona kickstart wax soo saarka dabiiciga ah ee testosterone jirkaada. Halkan waa hab lagu qaado daawooyinka;
Usbuucyada Nolvadex / maalin kasta Xaaladda maalintiiba
Oxymetholone (Anadrol) waxyeelo soo gaartay
The Natiijooyinka Anadol way fiican yihiin, laakiin mararka qaarkood waxay la imaan karaan waxyeelo xun. Inta badan saameynta daaweynta caleenta Nucleuriga ah waa mid la maamuli karo oo markaa kadib ayaa lagaa qaadi doonaa.
Raadi dhakhtar dareenka haddii aad hesho mid ka mid ah calaamadahan sababtoo ah fal-celinta xasaasiyadda;
Bararka cunaha, luqadda, dibnaha, iyo wejiga
Waxyeellooyinka daaweynta caleenta neefta ee ay sababtay isticmaalka muddada dheer waa cysts-ku buuxsamaysa dhiigga beerka ama beerka. Waxay sidoo kale keeni kartaa buro beerka.
Wac takhtar haddii aad leedahay mid ka mid ah kuwan;
Jaundice-yellowing ee indhaha iyo maqaarka.
Saxarada cagaarka ah
Xanuun caloosha sare ah
Barar cagaha iyo gacmaha
Isbedelka midabka maqaarka
Bararka naasaha ee naasaha
Dhiigbaxa (dhiig cirridka ama dhiigbaxa) ama nabar fudud, dhiig bax aan joojin
Xiiseyn isbedbedelka galmada, waxay hoos u dhigtay qadarka filimka oo laga soo saaro quudhsasho, dhib ka yimaadaa orgasm iyo awood la'aan
Dareemida xanuunka guska marka ay kacsan tahay
Kaadin ama xanuun badan
Dumarka isticmaalaya Oxymetholone waxaa laga yaabaa inay yeeshaan sifooyin khaas ah, waana inay, joojiyaan isticmaalka marka ay dhacaan ama raadsadaan talada dhakhtarka. Waxay ka mid yihiin;
Dulsaarka hoos u dhaca ama kordhay
Isbeddel ku yimaadda caadada caadada
Timaha wajiga koraya
Koritaanka timaha ee xabadka
Codka qallafsan ama qallafsan
Waxyeellooyinka caamka ah ee ka dhacaya labka iyo dheddig labadaba waxaa ka mid ah;
Dhibaatooyinka hurdo (Insomnia)
Dareemid farxad ama xasillooni la'aan
Barar naaso iyo jilicsanaan (labadaba rag iyo dumarba)
Miyaa Oxymetholone (Anadrol) ammaan ah in la qaato?
Nabadgelyada Nederland ma Amaanka Su'aashani waxay xoojisaa maskaxda dad badan oo daneynaya inay qaataan daroogada. Anadrol 50 waa ammaan haddii la saxo, laakiin waxaa laga yaabaa inaanay noqon haddii aad la kulantid mid ka mid ah xaaladaha soo socda;
Haddii aad ku jirto daroogo dhiig-yar oo khafiifiya sida Jantoven, Coumadin, Warfarin
Dhiigbaxa ama qabo dhiig-xinjirowga dhiigga
Kolestaroolka sare ama triglycerides
Cudurka halbowlaha wadnaha
Cudurka Wadnaha, Wadnaha Qalooca Wadnaha
Cudurka beerka ama kelyaha
Kansarka naasaha ee dumarka badan oo calcium ku leh dhiigga
Anadrol kuma aha amaan haddii aad uur leedahay. Waxay keeni kartaa waxyeello cunuggaaga aan dhalan oo xitaa keena cilladaha dhalashada. Haddii aad uur yeelato intaadan isticmaalin daroogada, u fiirso dhakhtar markiiba. Waxa kale oo lagugula talinayaa in aad isticmaasho hab wax ku ool ah oo loo xakameyn karo dhalashada inta aad isticmaalayso daroogada.
Daawadani waxay baddali kartaa bacriminta labadaba dumarka iyo ragga labadaba, sidaa darteed, waxaa lagaa qaadayaa taxadar badan.
Daraasad ku saabsan in loo gudbiyo ilmaha naas-nuujinta ilamaha naaska naaska ma wali la sameyn, loomana ogeyn haddii ay waxyeello keeni karto. Markaad isticmaasho daawadani ka fogow inaad yareyso naas nuujinta.
Dadka da'doodu ka yar tahay siddeed iyo toban jir waa inaysan u isticmaalin dawadan sababta oo ah waxay saameyn kartaa horumarinta lafahooda.
iibso Anadrol laga soo bilaabo boggayaga oo aan helno. Waa kuwan sida aad naga dalbato;
Waxaad nala soo xiriiri kartaa adoo adeegsanaya emailkayaga, wakiilka adeegga macaamiisha, internetka Skype ama nidaamkayaga emailka ah.
Si aad noogu caawiso inaan kuugu adeegno si ka fiican, u sheeg dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah ee ku saabsan amarka, ie, cinwaankaaga iyo tirada aad rabto inaad iibsato.
Wakiilkayaga adeegga macaamiisha ayaa kuugu soo laaban doona kuna siin doona siyaabo gaarsiinta, taariikhda imaanshada (ETA), lambarka raadinta, qadarka iyo shuruudaha bixinta ee ugu habboon.
Markaad bixiso amarkaaga, alaabta ayaa laguu soo dirayaa laba iyo tobanka saacadood ee soo socda (Tani waa mid kasta oo ka badan 10 kiilo).
Oxymetholone (Anadrol) sharci darro ah?
Sharciga isticmaalka, iibinta iyo iibsiga Oxymetholone way kala duwan tahay wadankan. Tusaale ahaan, UK, Canada, iyo Mareykanka isticmaalka daroogadan ayaa la oggol yahay, laakiin ka ganacsiga sharci darada ah waa mamnuuc. Si aad isaga ilaaliso dhibaatooyinkaaga, hubi haddii dalkaagu u ogolaado isticmaalka Ainrol.
Dalalka intooda badan, waxaad ku heli kartaa oo kaliya adigoo rijeeto soo qoray, laakiin inaad iska ilaaliso dhibaatada aad ku heli karto internetka.
Halkeen ka heli karaa Oxymetholone (Anadrol)?
Markaad naftaada la xiriirto bodybuilding, waxaa laga yaabaa in aad ogaato in heerka koritaanka murqahaagu aanu fiicnayn. Xitaa ka dib markaad wax qaban karto, waxaa laga yaabaa inaad ka careysiiso inaad ogaato inaadan helin meesha aad rabto. Xaaladaha kale, waxaad ogaan kartaa in uu jiro duf badan oo ku jira jirkaada. Dufanka noocan ahi wuxuu qarin doonaa muruqyadaada, waxaadna arki kartaa inaad isha ku heyso dhammaan xayiraadda.
Marka xaalad sidan oo kale ah, ha isku haleynin ilaa aad ka fekereyso waxa xiga. Maalmo markii aad ku weydiisatay qof walba oo qolka jimicsiga ah si uu u dhiso murqahaaga ayaa dheeraaday. Maalmahan, waxaad ku furtaa internetka, waxaadna ka heli kartaa dhammaan goobaha iibiya steroids online. Laakiin sidee ayaad ku ogaan kartaa goobta ugu fiican ee laga soo iibsan karo?
Sida steroid kasta oo aad iibsato, waxaa lagama maarmaan ah in aad iibsato Anadrol 50 ilo lagu kalsoon yahay. Halkaas waxaad ka hubsan kartaa in aad helayso qiimaha iyo tayada Oxymetholone ugu fiican. Iyada oo ay internetka leeyihiin sheyda badan oo ku qoran magaca iibiyeyaasha, waxaad ku dhici kartaa goobaha iibiya steroids been abuur ah ama faddaraysan. Qaar ka mid ah steroids ayaa laga yaabaa inaysan lahayn damaanad qaadasho xaqiiqda ah, waxayna ku dhammaan karaan inay si xun u saameynayaan jirkaaga. Oxymetholone dhabta ah ka hor iyo ka dib natiijooyinka waxay kala yihiin laba dunida oo dhan, waana in ay noqotaa kiiska marka aad bilowdo isticmaalka steroidskan.
Shabakadeena AASraw.com, waxaad awoodi doontaa inaad ududhurtid nadiif ah oo nadiif ah. Sicirka our oxymetholone waa jeebka-saaxiibtinimo, iyo iyada sharci ahaan, waxaa laguu xaqiijinayaa inaad hesho natiijooyin wanaagsan oo reer Anadol iyo saameynta ugu yar ee Nololeed. Nagu soo qaado maanta annaga oo isbeddel ku samee jirkaada waxa aad rabto inay noqoto.
Saartok T, Dahlberg E, Gustafsson JA (1984). "Xiriir isku xiran oo ka dhexeeya stabdhabyada anabolic-androgenic: marka la barbardhigo calaamadaha lagu garto xayawaanka ku jira xuubka iyo muruqyada qalfoofka, iyo sidoo kale galmada hormoon-xireysa globulin". Endocrinology. 114(6): 2100-6.
Pavlatos AM, Fultz O, Monberg MJ, Vootkur A, Pharmd (2001). "Dib u eegida oxymetholone: ​​steroid anabolic-altered 17alpha-alkylated". Clin Ther. 23(6): 789-801.
Zderic, John A ;; Carpio, Humberto; Ringold, HJ (Janaayo 1959). "Steroids. CVI. Synthesis of 7β-Methyl Hormone Analogs ". Journal of Chemical American Society. 81(2): 432-436.
Waxyaabaha 10 waxaad u baahantahay inaad ogaatid kahor intaadan qaadan DMAA
Waxkasta oo aad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Duufarka Macdanta Top 15 Winstrol Waxtarrada Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato Inta Aan Laga Helin Winstrol Online
Budada LCZ696 (936623-90-4)